Sergio Ramos Oo Laga Yaabo Inuu Ganaax Dheeraad Ah La Kulmo Kadib Markii Uu Kursiga Keydka Soo Fariistay Isagoo Ganaaxan Kulankii Xalay | Saxil News Network
Sergio Ramos Oo Laga Yaabo Inuu Ganaax Dheeraad Ah La Kulmo Kadib Markii Uu Kursiga Keydka Soo Fariistay Isagoo Ganaaxan Kulankii Xalay
Real Madrid ayaa xaalad kale oo qatar ah dhexda ka gali doonta maadama ay hadda sugi doonto go’aanka ay UEFA ka qaadato kabtan Sergio Ramos oo garoonka gudaha usoo galay xilli uu ka ganaaxnaa kulanka ay kasoo gudbeen Juventus.
Sergio Ramos ayaa jaale la gudoonsiiyay kulankii lugta hore labada kooxood ay ku ciyaareen Turin, taasoo la macno aheyd inuu seegayo kulankii xalay lagu ciyaaray Santiago Bernabeu.
Dhawr jeer ayey shaashaddu qabatay isagoo fadhiya VIP-da garoona, balse mar qura ayey kaamirooyinka qabteen isagoo ku sugan kursiga keydka kooxda si uu ciyaartoyda u dhiirigaliyo – waana sheeko aan sharciga waafaqsaneyn.
Xidigaan waxaa la sawiray isagoo fadhiya kuraasta sidoo kalana mar dhiirigalinaya xidigaha kooxda, sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in Massimiliano Allegri uu u sheegay xiddiga reer Spain inuusan booskaan isaga munaasab ku aheyn oo ay aheyd inuusan soo xaadirin.
Sharciga UEFA ayaa dhigaya hadii garsooraha uu soo gudbiyo warbixin sheegeysa in xidig ganaaxnaa uu ku adkeysto inuu soo xaadiro kursiga keydka uu heli doono ganaax dheeraad ah, sidaas darteed waxaa suuragal ah inuu seego kulanka lugta hore wareega semi final-ka Champions League oo ay la ciyaari doonaan midkood Roma, Liverpool & Bayern Munich.
Isku Aadka wuxuu dhici doonaa Jimcada – 13-ka April saacadda geeska Afrika markey tahay 2:00 Duhurnimo.